Manambara Ny Fitsarana Miaramila An’Ireo Mpanao Gazety Fa Fady Ny Manakiana Tafika Ao Tonizia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Desambra 2016 10:48 GMT
Miaramila Toniziana iray nanapiky ny masony nivavaka nandritra ny lanonan'ny Androm-pahatsiarovana tamin'ny 31 May 2010, tao âmin'ny tangorom-pasana sy toeram-pahatsiarovana Amerikana ao Afrika Avaratra sy tao amin'ny Fahatsiarovana ny Fasana Amerikana akaikin'ny Carthage, Tonizia. Sary: Tafika Amerikana ao Afrika, navoaka ho azon'ny rehetra ampiasaina
Notorian'ny miaramila tamin'ny fitsarana samy hafa ny mpanao gazety Toniziana roa, noho ny fanakianana ny rafitra miaramila sy ny hery mitam-piadiana ao amin'ny firenena. Mety hiatrika fanamelohana ho faty i Rached Khiari, lehiben'ny toniandahatsoratry ny tranonkalam-baovao an-tserasera Essada raha hita fa meloka tamin'ny “fanimbana ny herin-tsain'ny tafika sy manitakitsaka ny fiarovan-pirenena” izy.
Manamarika ireo fitoriana faramparany nataon'ireo miaramila tamin'ny bilaogera sy ny mpanao gazety nitranga hatramin'ny nionganan'ny fitondran'i Zine El Abidine Ben Ali nandritra ny 23 taona ny fitsarana.
Tamin'ny 16 Novambra, niampanga an'i Rached Khiari ny mpampanoa lalàna ara-miaramila noho ny fanalam-baraka, fanakianana ny lazan'ny tafika sy fanimbana ny herin-tsainy araka ny fehezan-dalànan'ny fitsarana miaramila sy ny Fehezan-dalàna famaizana amin'ny fisehoana amin'ny fahitalavitra izay nahitana azy nilaza ny fisian'ny toby miaramila Amerikanina ao amin'ny tany Toniziana. Ho fanohanana ny fiampangany, nitanisa ny lahatsoratra nivoaka tamin'ny 26 Oktobra tao amin'ny Washington Post i Khiari , sy ny “porofo” hitany manokana, na dia tsy fantatra mazava aza izay hevitra tiany hambara. Nitsipaka ireo tatitra ireo ny Minisitry ny Fiarovana Farhat Horchani tatỳ aoriana . Tamin'ny 22 Novambra, nilaza ny Filoha Beji Caid Essebsi fa ny drôna Amerikana tsy misy fiadiana no mampiasa ny toby miaramila ao amin'ny firenena mba hanatanteraka asa fanaraha-maso eny amin'ny sisintany Libyana.
Tamin'ny raharaha iray hafa, miatrika fiampangana tamin'ny faniratsirana ny miaramila ny mpanao gazety Jamel Arfaoui noho ny lahatsoratra iray izay nivoaka tao amin'ny gazety an-tserasera Tunisie Telegraph . Nanome tsiny ny fianjeran'ny angidimbin'ny miaramila tamin'ny 14 Jolay i Arfaoui tao amin'ny lahatsoratra izay nivoaka tamin'ny 30 Jolay, ary nahitana miaramila roa lahy namoy ny ainy, noho ny fanapahan-kevitra momba ny fikojakojana mekanika izay noraisin'ny minisiteran'ny fiarovam-pirenena .
Samy afaka amin'izao fotoana izao i Khiari sy Arfaoui, eo am-piandrasana ny fitsarana. Azo inoana fa hiatrika sazy henjana izy ireo raha hita fa meloka, eo anelanelan'ny telo volana ka hatramin'ny telo taona an-tranomaizina noho ny faniratsirana ny tafika araka ny andininy faha-91 ao amin'ny fehezan-dalàna miaramila, na dia teo aza ny zava-misy fa nampihatra ny zony haneho hevitra malalaka am-pilaminana sy nanao ny asany fotsiny izy ireo . Mety miampy roa taona fanampiny ny sazy miandry an'i Khiari sy lamandy noho ny fanalam-baraka, ary fanamelohana ho faty noho ny “fanimbana ny herin-tsain'ny tafika hanakorontanana ny fiarovam-pirenena ” araka ny andininy faha-60 bis ao amin'ny Fehezan-dalàna famaizana.
Tsy misy amin'izy roa na i Khiari na i Arafoui no voahenjika araka ny Lalànan'ny Gazety tamin'ny taona 2011 (didy hitsivolana faha-115 nivoaka tamin'ny 2 Novambra 2011) na dia mpanao gazety avokoa aza izy ireo, làlana izay lany taorian'ny revolisiona mba hanoloana ny fehezan-dalàna famoretana teo taloha nivoaka tamin'ny taona 1975. Ankoatra ny fiantohana ny “fahafahana mifanakalo hevitra, ny famoahana sy ny fandraisana vaovao eo amin'ny lafiny rehetra”, nanafoana ny sazy an-tranomaizina ho an'ireo mpanao gazety amin'ny raharaha fanalam-baraka sy fanendrikendrehana ny didy hitsivolana faha-115. Kanefa mbola manohy manitsakitsaka ity lalàna ity ireo mpitsara sy mpampanoa lalàna maro amin'ny alalan'ny fanamelohana sy fiampangana ireo mpanao gazety ary mampiasa lalàna famoretana izay manameloka ny fanalam-baraka ireo mpiasa-panjakana sy ny andrim-panjakana .
Tamin'ny 29 Septambra, nisioka momba ny raharahan'i Jamel Arfaoui ny biraon'ny Mpitati-baovao Tsy Voasakan-Tsisintany (Reporters Without Borders) any Afrika Avaratra :
Miatrika telo taona an-tranomaizina i Jamel Arfaoui noho ny fanenjehana ao amin'ny andininy faha-91 ao amin'ny fehezan-dalàna miaramila fa tsy ny didy hitsivolana faha-115
Tsy Misy Ny Fahalalahana Miteny Eo Anatrehan'ny Fitsarana Miaramila
Hatramin'ny revolisiona izay nanongana ny mpanao didy jadona Ben Ali tamin'ny volana Janoary 2011, niatrika fitsarana teo anatrehan'ny fitsarana miaramila ny mpanao gazety sy bilaogera maro noho ny firesahana zavatra mifandraika amin'ny andrim-panjakana miaramila na fitsikerana ireo mpitarika ny tafika .
Tamin'ny taona 2012, noenjehina teo anoloan'ny fitsarana miaramila ny mpanolotsain'ny filoha teo aloha Moncef Marzouki noho ny fitsikerana ny andraikitry ny tafika sy ny lehibeny tamin'ny fampodiana any Libya an'i Baghdadi Mahmoudi, praiminisitra teo ambany fitondran'i Gaddafi.
Tamin'ny taona 2013, voampanga tamin'ny faniratsirana ny tafika tao amin'ny bilaogy izay nahitana azy nitsikera ny fitondrana ny hopitaly miaramila ny bilaogera Hakim Ghanmi .
Tamin'ny faran'ny 2014, naiditra am-ponja noho ny “fanalam-baraka ny tafika” sy ny “fanompana mpitarika miaramila” tamin'ny alalan'ny hafatra tao amin'ny Facebook ny bilaogera Yassine Ayari .
Hatramin'ny taona 2011, nihetsika mba hampiditra fanovana demaokratika maro i Tonizia, anisan'izany ny famaranana ny politikan'ny sivana amin'ny aterineto, ny fananganana ny lalampanorenana izay miantoka ny zo fototra sy ny fahafahana, ary ny fametrahana ny mpanara-maso mahaleo tena ho an'ny sehatra fampitam-baovao. Na izany aza, avelan'ny lalàna amin'ny famerenana ilalana ny fanavaozana ny fitsarana miaramila handray an-tanana ny raharaha mahakasika olon-tsotra.
Tamin'ny 26 Oktobra, nametraka volavolan-dalàna (volavolan-dalàna laharana faha-72 taona 2016) ny solombavambahoaka miisa 20 mba hanafoanana ny fitsarana ara-miaramila an'ireo olom-pirenena mba hampifanaraka azy amin'ny lalampanorenana nivoaka tamin'ny taona 2014 ary miantoka ny zo ara-drariny amin'ny fitsarana, sy mitana ny tribonaly miaramila ho “fitsarana navahana manokana handinika ny heloka vitan'ny miaramila”. Manolotra ny fanitsiana ny andininy faha-91 amin'ny fehezan-dalàna miaramila ny volavolan-dalàna mba handrarana ny fitsarana olon-tsotra noho ny “fanalam-baraka ny sainam-pirenena, na ny tafika, na mandika lalàna manohitra ny fahamendrehana, ny laza na ny herin-tsain'ny tafika, na manao asa manozongozona ny rafitra mifehy ny miaramila, ny fankatoavana sy ny fanajana ny lehibe na mitsikera ny ataon'ny ambaratongam-pahefan'ny tafika na ny miaramila manamboninahitra, na manafintohina ny voninahiny.” Mbola henjehina araka ny andininy faha-91 ireo mpikambana ao amin'ny andrim-panjakana miaramila na izany aza. Mitaky ny “fanafoanana avy hatrany” ny andininy faha-91 momba ny fehezan-dalàna miaramila ny Article19, vondrona iray mpitaky ny fahalalahana miteny, satria hita fa” famerana tsy mifanaraka amin'ny fahalalahana maneho hevitra” izany.
Tsy mbola mazava ny fotoana hanaovan'ny parlemanta ny adihevitra sy hankatoavana ny fanitsiana, satria mbola miady amin'ny fandrahonan'ny fampihorohoroana i Tonizia dia maro ireo mpanao gazety, bilaogera sy mpaneho hevitra no mety tsy ho sahy handika ny lalàna mifandraika amin'ny andrim-panjakana ara-miaramila sy ny fiarovana. Mbola hampitombo hatrany ny fanampenam-bava sy ny olan'ny fitsikerana amin'izay mety ilaina indrindra amin'ny tombontsoam-bahoaka ny nanaovan'ny fitsarana miaramila ho lasibatra ireo mpanao gazety sy bilaogera.